TIM Ampitatafika : velona hatrany ny antoko ! – MyDago.com aime Madagascar
TIM Ampitatafika : velona hatrany ny antoko !
Nifamotoana teny Ampitatafika indray tamin’ity androany ity ny mpitarika foiben’ny antoko Tiako i Madagasikara, nahitana an’i Depioté isany : Zafilahy Stanislas, Jules Andriamaholison, Mamitiana Ravelonanosy, Rodin Rkotomanjato, ny senatera Robert sy Rolland Ravatomanga sy ireo mpikambana fototry ny antoko.
Tamin’izany no nanazavan’ireo mpitarika politika ny foto-kevitra an-kapobeny ijoroan’ny antoko.Ny fijeriny ny fanampahan-kevitry ny fianakaviam-be iraisam-pirenena momba ny toe-draharaha eto Dago, ny momba ny fandraisan’ny CPI an-tanana ny fanadihadiana ny raharaha 07 febroary.
Tsy adinon’ny birao foibe ny antoko TIM ny nanentana ny vahoaka hivonona hatrany amin’ny toro-marika omen’ny mpitarika indrindra ny filoha Ravalomanana.
Antoko Avotra ho an’ny Firenena
Auteur Solo Razafy*Publié le 20 juillet 2011 20 juillet 2011 Catégories Politique
2 réflexions sur « TIM Ampitatafika : velona hatrany ny antoko ! »
21 juillet 2011 à 14 h 28 min
Mampalahelo ahy ianareo, tena kamboty, tsy misy vahoaka mba manaraka akory, mba miaraha am vahoaka am zay fa ra8 efa naloan’ny olona e!
21 juillet 2011 à 17 h 58 min
Ianareo no efa lany henatra tsy mahalala TSY TIANA,efa izao tontolo izao no miaiky ny
haratsianareo,MIAOKA anareo!efa lany henatra!tsy misy haleha mantsy ,mahery an-tanana
@ alabotry satria manana basy,dia manararaotra ery,ka iza no vahoakanareo eo???? mba lazao hoe???ireo
VOAVIDY nanaraka anareo aza efa nokikisan’ny nenina,izay sisa tsy namono tena ry manontany a!
fa nitampina inona ity voamaso no tsy nahita ireny vahoaka nitsena an’i dadanay teny Ivato ireny?sa nisitri-belona
fa nanao ratsy???mbola vao ireny aza efa tsy zaka fa nalaky nosakanana izay voasakana! tsy zakan’ny tsenanareo
ireny e!andana mandaiga sy mandroba dia aza manantena fa ahazo vahoaka ,fa tsy loha-poza toa anareo daholo akory
ny vahoaka na miara MITAVANDRA aminareo ny HALATRA SY SOLOKY HATAONAREO ka tsy maintsy hankasitraka
anareo na dia efa fahananareo MALOTO aza.
Précédent Article précédent : Le salaire de tous les membres de la CT s’est envolé…
Suivant Article suivant : Andry Rajoelina lasa nitsangatsangana, ny vahoaka maty noana !